ဘောလိဝုဒ်မင်းသမီးချော Katrina Kaif ရဲ့ အလှအပထိန်းသိမ်းပုံလျှို့ဝှက်ချက်က ဘာတွေများဖြစ်မလဲ? – Trend.com.mm
ဘောလိဝုဒ်မင်းသမီးချော Katrina Kaif ရဲ့ အလှအပထိန်းသိမ်းပုံလျှို့ဝှက်ချက်က ဘာတွေများဖြစ်မလဲ?
ဗြိတိန်-အိန္ဒိယမင်းသမီးချော Katrina Kaif ဟာဆိုရင် အမြဲတမ်းလှပပြီး ခန္ဓာကိုယ်ဆိုလည်းသွယ်လျလို့ မိန်းကလေးချင်းတောင်ငေးရလောက်အောင်လှပသူတစ်ယောက်ပါ။ဘောလိဝုဒ်ရဲ့နာမည်ကျော်တစ်ယောက်ဖြစ်လို့ အလှအပနဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို အမြဲထိန်းသိမ်းနေရသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ သူမရဲ့ အလှအပလျှို့ဝှက်ချက်လေးတွေ၊သွယ်လျနေရတဲ့လျှို့ဝှက်ချက်လေးတွေကို Trend ပျိုမေတို့အတွက် ပြန်ပြီးမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
*Katrina က မနက်မိုးလင်းလို့ နိုးတာနဲ့ ရေဖန်ခွက်လေးခွက်လောက်သောက်တယ်လို့သိရပါတယ်။
*သူမက ညမအိပ်ခင် မိတ်ကပ်ဆိုလည်းပြောင်စင်အောင်ဖျက်ပြီး မျက်နှာအတွက် လိုအပ်တဲ့ခရင်မ်တွေကို မမေ့မလျော့၊မပျင်းမရိလိမ်းပါတယ်တဲ့။
*Mask ကိုလည်း ပုံမှန်လုပ်ပေးပြီး မျက်နှာအတွက်တင်မက မျက်လုံးကျန်းမာရေးကိုလည်းအမြဲဂရုစိုက်ပေးတယ်လို့သိရပါတယ်။
*ရှုတင်မရှိဘူးဆိုရင် မျက်နှာကိုလည်းဘာမှမလိမ်းပဲ သဘာဝအတိုင်းထားလေ့ရှိပါတယ်။မိတ်ကပ်လိမ်းရင်လည်း အထူကြီးလိမ်းလေ့မရှိပါဘူး။
*သဘာဝနည်းလမ်းတွေကိုလည်း နှစ်သက်သူတစ်ယောက်ပါ။သူမက မိတ်ကပ်မလိမ်းခင်မှာ ရေခဲတုံးလေးကို အ၀တ်စသန့်သန့်ထဲထည့်ပြီး မျက်နှာကို ဖွဖွလေးပွတ်ပေးလေ့ရှိပါတယ်တဲ့။ပြီးတော့မှ မိတ်ကပ်လိမ်းခြယ်တာလို့သိရပါတယ်။ရေခဲတုံးက မိတ်ကပ်ကိုပိုပြီးခံစေသလို အသားအရည်ကိုလည်းတောက်ပစေပါတယ်။
*အပြင်ထွက်တဲ့အချိန်တိုင်း မျက်နှာတင်မက ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုပါ နေလောင်ခံခရင်မ်တွေလိမ်းပြီးမှ အပြင်ထွက်လေ့ရှိပါတယ်။
*ဆံပင်ကိုလည်း အပူပေးကိရိယာတွေမသုံးပဲ ဆံပင်မပျက်စီးစေတဲ့ serum ကို အများဆုံးလိမ်းလေ့ရှိပါတယ်။
သူမရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အလှအပအတွက် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပုံကတော့…
*Katrina ဟာ သူမရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ပုံကျလှပနေဖို့ ယောဂလေ့ကျင့်ခန်းပုံမှန်လုပ်ပြီးထိန်းသိမ်းပါတယ်တဲ့။
*သူမရဲ့  fitness trainer ကတော့ Yasmin Karachiwala ပါ။
*Gym ကစားတာ၊ရေကူးတာ၊နှေးနှေးပြေးတာတွေကို အများဆုံးလုပ်လေ့ရှိပါတယ်။
*သူမရဲ့ မနက်စာက အုတ်ဂျုံမှုန့်နဲ့လုပ်ထားတဲ့မနက်စာဖြစ်ပြီး နေ့လည်စာကိုတော့ထောပတ်သုတ်ထားတဲ့ အညိုရောင်ပေါင်မုန့်နဲ့ငါးကင်ကိုစားပါတယ်။ညစာကိုတော့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်စွပ်ပြုတ်၊ငါးစွပ်ပြုတ်တွေကိုပဲ စားလေ့ရှိပါတယ်။
နာမည်ကျော်မင်းသမီးတစ်ယောက်ဆိုတော့ အမြဲတမ်းအလှအပနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုထိန်းသိမ်းနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့သူမရဲ့ နည်းလမ်းလေးတွေထဲက ကိုယ်လုပ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းလေးတွေကို ယူပြီးလုပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် သူမလို လှပတဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့လှပမှုလေးကို ယူတို့လည်းပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါတယ်လို့…။
ဗွိတိနျ-အိန်ဒိယမငျးသမီးခြော Katrina Kaif ဟာဆိုရငျ အမွဲတမျးလှပပွီး ခန်ဓာကိုယျဆိုလညျးသှယျလလြို့ မိနျးကလေးခငျြးတောငျငေးရလောကျအောငျလှပသူတဈယောကျပါ။ဘောလိဝုဒျရဲ့နာမညျကြျောတဈယောကျဖွဈလို့ အလှအပနဲ့ ခန်ဓာကိုယျကို အမွဲထိနျးသိမျးနရေသူလညျးဖွဈပါတယျ။ဒီတော့ သူမရဲ့ အလှအပလြှို့ဝှကျခကျြလေးတှေ၊သှယျလနြရေတဲ့လြှို့ဝှကျခကျြလေးတှကေို Trend ပြိုမတေို့အတှကျ ပွနျပွီးမြှဝပေေးလိုကျပါတယျ။
*Katrina က မနကျမိုးလငျးလို့ နိုးတာနဲ့ ရဖေနျခှကျလေးခှကျလောကျသောကျတယျလို့သိရပါတယျ။
*သူမက ညမအိပျခငျ မိတျကပျဆိုလညျးပွောငျစငျအောငျဖကျြပွီး မကျြနှာအတှကျ လိုအပျတဲ့ခရငျမျတှကေို မမမေ့လြော့၊မပငျြးမရိလိမျးပါတယျတဲ့။
*Mask ကိုလညျး ပုံမှနျလုပျပေးပွီး မကျြနှာအတှကျတငျမက မကျြလုံးကနျြးမာရေးကိုလညျးအမွဲဂရုစိုကျပေးတယျလို့သိရပါတယျ။
*ရှုတငျမရှိဘူးဆိုရငျ မကျြနှာကိုလညျးဘာမှမလိမျးပဲ သဘာဝအတိုငျးထားလရှေိ့ပါတယျ။မိတျကပျလိမျးရငျလညျး အထူကွီးလိမျးလမေ့ရှိပါဘူး။
*သဘာဝနညျးလမျးတှကေိုလညျး နှဈသကျသူတဈယောကျပါ။သူမက မိတျကပျမလိမျးခငျမှာ ရခေဲတုံးလေးကို အဝတျစသနျ့သနျ့ထဲထညျ့ပွီး မကျြနှာကို ဖှဖှလေးပှတျပေးလရှေိ့ပါတယျတဲ့။ပွီးတော့မှ မိတျကပျလိမျးခွယျတာလို့သိရပါတယျ။ရခေဲတုံးက မိတျကပျကိုပိုပွီးခံစသေလို အသားအရညျကိုလညျးတောကျပစပေါတယျ။
*အပွငျထှကျတဲ့အခြိနျတိုငျး မကျြနှာတငျမက ခန်ဓာကိုယျတဈခုလုံးကိုပါ နလေောငျခံခရငျမျတှလေိမျးပွီးမှ အပွငျထှကျလရှေိ့ပါတယျ။
*ဆံပငျကိုလညျး အပူပေးကိရိယာတှမေသုံးပဲ ဆံပငျမပကျြစီးစတေဲ့ serum ကို အမြားဆုံးလိမျးလရှေိ့ပါတယျ။
သူမရဲ့ ခန်ဓာကိုယျအလှအပအတှကျ လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျပုံကတော့…
*Katrina ဟာ သူမရဲ့ ခန်ဓာကိုယျပုံကလြှပနဖေို့ ယောဂလကေ့ငျြ့ခနျးပုံမှနျလုပျပွီးထိနျးသိမျးပါတယျတဲ့။
*သူမရဲ့fitness trainer ကတော့ Yasmin Karachiwala ပါ။
*Gym ကစားတာ၊ရကေူးတာ၊နှေးနှေးပွေးတာတှကေို အမြားဆုံးလုပျလရှေိ့ပါတယျ။
*သူမရဲ့ မနကျစာက အုတျဂြုံမှုနျ့နဲ့လုပျထားတဲ့မနကျစာဖွဈပွီး နလေ့ညျစာကိုတော့ထောပတျသုတျထားတဲ့ အညိုရောငျပေါငျမုနျ့နဲ့ငါးကငျကိုစားပါတယျ။ညစာကိုတော့ ဟငျးသီးဟငျးရှကျစှပျပွုတျ၊ငါးစှပျပွုတျတှကေိုပဲ စားလရှေိ့ပါတယျ။
နာမညျကြျောမငျးသမီးတဈယောကျဆိုတော့ အမွဲတမျးအလှအပနဲ့ခန်ဓာကိုယျကိုထိနျးသိမျးနရေတာဖွဈပါတယျ။ဒီတော့သူမရဲ့ နညျးလမျးလေးတှထေဲက ကိုယျလုပျနိုငျတဲ့နညျးလမျးလေးတှကေို ယူပွီးလုပျကွညျ့မယျဆိုရငျ သူမလို လှပတဲ့ခန်ဓာကိုယျနဲ့လှပမှုလေးကို ယူတို့လညျးပိုငျဆိုငျနိုငျပါတယျလို့…။
Posted in Beauty, Lifestyle, News
မှော်ဆန်ဆန် ဇာတ်ကားကြိုက်သူများအတွက် The House withaClock in Its Walls